Zenziwe ngantoni iingcango zokhuseleko? -TSINFA
Ukuze ube namandla okulwa nobusela, umnyango olwa ubusela kufuneka uhambe ngenkqubo yemveliso entsonkothileyo nengqongqo.
Isakhelo se-3 sangaphakathi
7.Welding iindawo ezincinane
Iinkqubo ezili-11 ezichanekileyo ziyafuneka:
1. Ukucanda ipleyiti: inkqubo yokusika ikhonkco elibaluleke kakhulu kwimveliso yeengcango. Isantya sokusika kunye nomgangatho zichaphazela ngokuthe ngqo inkqubela phambili yemveliso kunye nomgangatho weengcango zokhuseleko. Kwimveliso yokwenyani, kufuneka ukhethe umatshini wokucheba ofanelekileyo ngokobunzima bepleyiti, ukuthintela ukusika ubukhulu. I-blade ephezulu yomatshini wokucheba igxile kwisiphatho sesixhobo, kwaye isitshixo esezantsi similiselwe kwibhentshi yomsebenzi. Phambi kokungena kumatshini wokucheba, i-engile yeplati kufuneka ihlengahlengiswe kwaye ilungiswe ngumdlalo ukunciphisa ukugqwetha ipleyiti, ukuze ufumane indawo yokusebenza esemgangathweni.
2. Ukucwangciswa kwepleyiti yentsimbi: ngohlobo lwe-embossing eyenziweyo, i-die yenziwe, kunye ne-tonnage enkulu, itafile encinci encinci kunye nokuchaneka okuphezulu kwemitha emithathu kunye nekholamu esibhozoUmatshini wokushicilela we-hydraulicisetyenziselwa ukukhawulezisa ngokukhawuleza isitya sensimbi esibandayo okanye isinyithi. Ngexesha le-embossing, isangqa somda sisetyenziselwa ukucofa umda wepleyiti, emva koko ipateni oyifunayo ifunyanwa ngokucinezela ii-cores zokufa ezingaphezulu nezisezantsi. Ngokutshintsha isiseko sokubumbela, umatshini unokusetyenziselwa ukucofa iindidi zeepateni, kwaye isiphumo se-embossing silungile, iphethini icacile kwaye umbono onamacala amathathu womelele. Uxinzelelo olusebenzayo, ukucofa isantya kunye nokubetha kwemiqolo emithathu yomqolo osibhozo wokushicilela we-hydraulic unokuhlengahlengiswa kuluhlu oluchaziweyo lweparamitha ngokweemfuno zenkqubo. Umatshini uneendlela ezizimeleyo zamandla kunye nenkqubo yombane, kwaye usebenzisa iqhosha lolawulo oluphakathi, olunokuqonda iindlela ezintathu zomsebenzi: incwadana, isemi-esizenzekelayo nesenzekelayo. Inokuqonda iindlela ezimbini zokucinezela: uxinzelelo rhoqo kunye noluhlu olumiselweyo. Umsebenzi ulula kwaye ulula, kwaye umatshini wonga umbane kwaye usebenza ngokufanelekileyo.
3. Isakhelo se-embossing: Sebenzisa uhlobo lwesakhelo gantry ocinezela ngesanti kubunzulu baphantsi ngesakhelo sombhalo osolukiweyo ukucofa ukufumana ipateni efunekayo. Isakhelo sokucoca umatshini wokumakisha sisebenzisa isakhiwo esivulekileyo, esinoqoqosho nesisebenzayo. Ulawulo hydraulic isebenzisa inkqubo ehlangeneyo wevali iCartridge ukunciphisa indawo umbethe. Inesenzo esithembekileyo, ubomi obude benkonzo, ukomelela okuhle kunye nokuqina, kunye nembonakalo entle.
Ukubetha ngenqindi: ukubetha ngenqindi nge-25t, 35t ukubetha ngenqindi. Emva kokuba ipleyiti ilungiswe ngenqindi, inkqubo yokuhlukunyezwa kwezitshixo eziphambili, umngxunya wecala, umngxunya wokubamba, umngxuma wokungena emnyango, umngxuma wecala kunye nomngxunya wamehlo wekati kugqityiwe ukuze kuqinisekiswe indawo echanekileyo kunye nobukhulu obuchanekileyo.
5.Ukubeka izinto ngokweemfuno: ngokweemfuno zoyilo zeemveliso zeminyango eyahlukeneyo yokulwa ubusela, ipleyiti ibekwe kumatshini wokutsala ucango oluzenzekelayo ukuze ubambe indawo emiselwe kwangaphambili yehenjisi yomnyango olwa nobusela.
6.Ukugoba: beka ubuso bomnyango kunye nesakhelo somnyango kwibhentshi yokusebenza komatshini oguqa ngamanzi, cofa ngeplate yokucofa, khetha inotshi yokugoba, ukuseta ukubetha, kunye nokugqiba inkqubo yokugoba komphezulu womnyango kunye nesakhelo somnyango emva kwamaxesha aliqela wokuphindaphinda .
7. Ukuwelda iinxalenye ezincinci: inkqubo ye-welding yombane yenziwa ngamacandelo amancinci kumnyango wokulwa nobusela ekufuneka uhlelwe ngaphambili kwimveliso yokuqala, kubandakanya ipleyiti esisigxina, ipleyiti ephezulu yokutywina, ibhokisi yokutshixa ephambili kunye nezinye iindawo.
8. I-Phosphating: isitya sensimbi sifakwa kwisisombululo sokukha kunye nesephosphating. Emva kokuthanjiswa, ukufunxwa, ukukhethwa, ukuphononongwa kunye nezinye iinkqubo, umaleko wokhuseleko lwefosfathi uyenziwa phezu komnyango wokulwa ubusela, ukuze uqiniseke ukuba ipleyiti ayizukurusa ngaphambi kokutshiza, ukulungiselela ukutshiza ngeplastikhi.
9. Ukuncamathelisa: gcwalisa umsantsa ophakathi ngaphambili neepaneli zomnyango zangasemva ngephepha lobusi, umqhaphu ongacimi umlilo kunye nezinye izinto zokugcwalisa, kwaye usebenzise umaleko ocofa umatshini oshushu wokucofa ukunamathela kwiphaneli yomnyango ukuyenza imilo.
10. Ukutshiza ngeplastikhi: kusetyenziswa umbane omkhulu wombane ongashukumiyo, ipholiyesta, i-epoxy kunye nezinye iipeyinti zepolymer zitshizwa kumphezulu womnyango olwa nobusela emva kokuba kufakwe i-phosphating ukwenza umaleko wenqanawa ekhusela umhlwa.
11. Ukutshintshela ukuprinta: tshiza okhethekileyo "wokuhambisa umgubo" kumphezulu womnyango wokhuseleko, iglu kunye noncamathisela iphepha lokudlulisa. Emva kwemizuzu engama-20 ngo-165 ℃, umaleko owomeleleyo, onganyangekiyo umhlwa, onzima kwaye umhle wokutyabeka wenziwe.
12. Umbala wokubhaka: xhoma ucango oluchasene nobusela kwaye uwuthumele ehovini ukuze ukubhaka kubushushu obuphezulu, ukuze kulungiswe ukutshiza kunye nokudlulisa isiphumo, kunye nokunyusa amandla okuphela kocingo oluchasene nobusela.
13. Ukucoca: ucango oluchasene nobusela luyakucocwa, kwaye intsalela yenkqubo yangaphambili iyakususwa, emva koko imveliso iyakupakishwa ngokusesikweni ihanjiswe.
Okwangoku, intengiso yeminyango yoKhuseleko ikwixesha lotshintsho "ukusuka kubungakanani ukuya kumgangatho". Ukusuka kwindawo yokujonga ngokubanzi, phantsi kovuselelo lokuphuculwa kokusetyenziswa kunye nokufudukela kwabantu ezidolophini, ithemba lentengiso lomnyango olwa ubusela libanzi. Ukusuka kwindawo encinci yokujonga, kunye nokuphuculwa okuqhubekayo kokuqwashisa ngokhuseleko kwabantu kunye nemfuno yokhuseleko, intle kwaye umgangatho ophezulu iimveliso zeminyango yokulwa ubusela ngokuqinisekileyo ziya kubonakala kwaye zizise "inzuzo egqithisileyo" kumashishini emveliso. Njengesiseko semveliso, umgca wokulahleka kwemveliso wangoku kunye neengcango zokulwa ubusela ziya kuba "zizinto eziyimfuneko" kula mashishini emveliso.